Iji ghọta ụdị njehie ndị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-esi n'aka ndị nabatara na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, ka anyị tụlee ntuli aka nyocha nke Literary Digest nke gbalịrị ịkọ ọdịnihu nke nhoputa ndi ochichi nke 1936. Ọ bụ ezie na ọ mere ihe karịrị afọ 75 gara aga, ntụpọ a ka nwere ihe dị mkpa iji kụziere ndị nchọpụta taa.
Literary Digest bụ magazin ndị na-ewu ewu na-agụkarị, ma na-amalite n'afọ 1920, ha malitere ịme ntuli aka ndị omeiwu ịkọwapụta ihe nrite nke nhoputa ndi ochichi. Iji mee amụma ndị a, ha ga-ezigara ndị nza akwụkwọ nzaba maka ọtụtụ ndị mmadụ wee gụzie akwụkwọ nlele ahụ; Literary Digest kwupụtara mpako na ntuli aka ha natara abụghị "ọhụụ, gbanwee, ma ọ bụ kọwaa ya." Nke a na-akọwa n'ụzọ ziri ezi ndị mmeri nke ntuli aka n'afọ 1920, 1924, 1928 na 1932. N'afọ 1936, n'etiti Oké Mwute, Akwụkwọ ọgụgụ Digest zigara nde mmadu iri nde mmadu mmadu, ndi aha ha biara karia site na ederede oku na akuko ndekọ akuko. Nke a bụ otú ha si kọwaa usoro ha:
"ONYE na-eji ire ụtọ na-ebugharị ngwa ngwa nke ihe dị ka afọ iri atọ iji belata ihe ndị a na-ahụ maka ya. Kwa ụbọchị, n'otu nnukwu ụlọ dị elu n'elu ụzọ anọ nke ụzọ ụgbọ mmiri, nke dị na New York, ndị ọrụ 400 na-eji nwayọọ nwayọọ kpoo otu nde iberibe akwụkwọ dị iche iche-iji mee ka oghere obodo iri anọ-n'ime ederede ahụ. Oge awa ọ bụla, n'ime ụlọ ọrụ Post Office, ndị ọrụ ntinye akwụkwọ ozi atọ na-ekwu okwu ma kpoo oblong ndị ọcha; ndị ọrụ nzi ozi mara ihe na-atụba ha n'ime akwụkwọ ozi mail; Ụgbọ mmiri ndị na-agba ọsọ ụgbọ mmiri na-ebugharị ha iji gosi mail-ụgbọ oloko. . . Izu na-esote, azịza mbụ site na nde iri a ga-amalite nbịakọta nke akara ngosi nke akara, ka a tụlee ya atọ, kwenye, ugboro ise na-agafe na nkewa. Mgbe agwụla ma chọpụta onye ikpeazụ ahụ, ma ọ bụrụ na ahụmahụ gara aga bụ njirimara, mba ahụ ga-ama n'ime pasent nke pasent 1 nke votu a na-ewu ewu nke nde mmadụ anọ (ndị na-eme ntuli aka). "(August 22, 1936)
Akwukwo nke akwukwo Liteest Digest ka enwere ike ighota onye obula ihe omuma a. N'ime nde votu 10 a kesara, a gbanwere ihe dị ka nde mmadụ anọ na nde iri anọ na anọ-ihe dị ka okpukpu 1000 karịa ntuli aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a. Site na ndị na-azaghachi nde mmadụ 2.4, mkpebi ahụ doro anya: Alf Landon ga-emeri Franklin Roosevelt. Ma, n'eziokwu, Roosevelt meriri Landon n'ime ala. Kedu ka akwụkwọ Liteest Digest ga-esi jupụta data dị ukwuu? Nghọta anyị nke oge a banyere nlele na-eme ka emerede Literary Digest doro anya ma nyere anyị aka izere ịme ihe ndị yiri nke ahụ n'ọdịnihu.
Iche echiche n'ụzọ doro anya banyere nlele chọrọ ka anyị tụlee ìgwè dị iche iche dị anọ (nọmba 3.2). Òtù mbụ bụ ndị nọ na ya ; nke a bụ otu nke onye nchọpụta ahụ kọwara dị ka ọnụ ọgụgụ ndị mmasị. N'ihe banyere Literary Digest , ndị mmadụ nọ na ya bụ ndị ntuli aka na nhoputa ndi ochichi 1936.
Mgbe ị na-ekpebi na ndị mmadụ nọ na ya, onye na-eme nchọpụta kwesịrị ịmepụta ndepụta nke ndị mmadụ nwere ike iji mee ihe maka nlele. A na-akpọ ndepụta a nkwụnye ihe nlele ma ndị mmadụ nọ na ya na-akpọ obodo . O bu ihe kwesiri, ndi mmadu ajuju na ndi mmadu ndi mmadu ga-abu otu ihe, ma n'omume nke a abughi ikpe. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe gbasara Akwụkwọ Liteest Digest , e nwere ọtụtụ nde ndị mmadụ aha ha na ndekọ aha ekwentị na ndekọ ndebanye aha ụgbọala. A na-akpọ ọdịiche dị n'etiti ndị na-eche na ndị mmadụ na etiti obodo dị ka njehie mmechi . Njehie njehie adịghị, site n'onwe ya, nsogbu nsogbu. Otú ọ dị, ọ nwere ike iduga mkparị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ nọ na etiti obodo dị iche iche na ndị dị iche iche na ndị na-anọghị na ya. N'ezie, nke a bụ kpọmkwem ihe mere na nchịkọta Literary Digest . Ndi mmadu bi na ndi mmadu ha nwere ike ime ka Alf Landon kwadoro ha, n'ihi na ha bara ọgaranya (cheta na ma telephones na ugbo di obere ma buru oke ahia na 1936). Ya mere, na nchịkọta Literary Digest , njehie na-eduga n'ịgbachi anya.
Ntụle 3.2: Nrụpụta ndị nnọchiteanya.
Mgbe o kwusịrị ọnụ ọgụgụ ndị e kere eke , nzọụkwụ ọzọ bụ maka onye na-eme nchọpụta ịhọrọ ọnụ ọgụgụ mmadụ ; ndị a bụ ndị onye nchọpụta ga-anwa ịjụ ajụjụ ọnụ. Ọ bụrụ na sample nwere ọdịiche dị iche iche karịa ọnụ ọgụgụ osisi, mgbe ahụ, ntanetị nwere ike ịmepụta njehie nlele . N'ihe banyere Literary Digest fiasco, Otú ọ dị, e nweghị n'ezie ngwaahịa-magazin ahụ iji kpọtụrụ onye ọ bụla nọ na etiti obodo-ya mere ọ dịghị ihe ọjọọ ọ bụla. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-elekwasị anya n'ichepụta njehie-nke a bụ naanị ụdị njehie nke njedebe nke njehie a kọrọ na nyocha-mana Literary Digest fiasco na-echetara anyị na anyị kwesịrị ịtụle isi mmalite nke njehie, ma usoro ma usoro.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-ahọrọ ọnụ ọgụgụ dị elu, onye na-eme nchọpụta na-anwa ịjụ ajụjụ niile ya. Ndị a na-enyocha nke ọma na-akpọ ndị zara . O doro anya na ọnụ ọgụgụ nke ndị bi na ndị na-azaghachi ga-abụ otu ihe ahụ, ma na omume enwereghị aka. Nke ahụ bụ, ndị mmadụ na-ahọrọ na sample mgbe ụfọdụ adịghị eso. Ọ bụrụ na ndị na-anabata dị iche iche n'ebe ndị na-adịghị eme, mgbe ahụ, e nwere ike nonresponse echiche ọjọọ. Ihe a na-akpọ Nonresponse bụ nsogbu nke abụọ na nchịkọta Literary Digest . Naanị pasent 24 nke ndị natara akwụkwọ nzaghachi zara ya, o wee pụta na ndị kwadoro Landon nwere ike ịzaghachi.
Ewezuga ịbụ naanị ihe atụ ịmeghe echiche nke nnọchite anya, nchịkọta Literary Digest bụ ihe atụ ugboro ugboro, na-adọ ndị na-eme nnyocha aka maka ihe ize ndụ nke nlele nke ihe ize ndụ. O di nwute, echere m na ihe mmụta nke ọtụtụ ndị si na akụkọ a bụ ihe ọjọọ. Omume kachasị mma nke akụkọ ahụ bụ na ndị na-eme nchọpụta enweghị ike ịmụta ihe ọ bụla site na ihe atụ na-agaghị adị na ya (yabụ, ihe atụ na-enweghị iwu doro anya nke nwere ike ịdabere maka ịhọrọ ndị so na ya). Ma, dika m ga egosi na nke a n'isiokwu a, nke a abughi ezi. Kama nke ahụ, echere m na omume abụọ dị na akụkọ a; omume ndị dị taa dịka ha dị na 1936. Nke mbụ, nnukwu ihe nchịkọta data anakọtara agaghị ekwe nkwa dị mma. N'ozuzu, inwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-aza ajụjụ na-ebelata ngbanwe nke atụmatụ, ma ọ dịghị eme ka ibelata mkpesa. Site na otutu data, ndị na-eme nchọpụta nwere ike mgbe ụfọdụ nweta nkọwa zuru oke nke ihe ọjọọ; ha nwere ike ịbụ ndị na- ezughị ezu (McFarland and McFarland 2015) . Ihe omuma nke abuo sitere na Literary Digest fiasco bu na ndi oru nyocha kwesiri ighota otua esi achikota ihe omuma ha mgbe ha na-eme atụmatụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebe ọ bụ na usoro ntinye aka na ntụrụndụ Literary Digest ji nwayọọ nwayọọ skewed ụfọdụ ndị nabatara, ndị na-eme nchọpụta chọrọ iji usoro ntụgharị usoro dị mgbagwoju anya karịa ndị ọzọ. Mgbe e mesịrị na isi nke a, m ga-egosi gị otu usoro dị oke egwu - nrụgide-nke ga-enyere gị aka ịme atụmatụ ka mma site na ihe atụ ndị na-adịghị mma.